Mobilkada:- Ka Badbaadi Naftaada Khatarta Kugu Dhaw, Wax ka Ogow Lexdan dhacdo. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 31 October 2018 22 November 2018
muqdisho ( Mareeg News ) Haweeney shiineys ah oo Gaari ku waday wado casri ah ayaa mar qura waxaa si Deg deg ah u qarxay Telphonkeeda.
Maamulka DASHCA ayaa ku guuleystay in uu diiwaan-galiyo dhacdadan: haweeneydu waxay maqashay Dhawaq xadhig, telefoonkuna wuxuu ku burburay ololka dabka qabsaday, iyo soo bixinta qiiqa.
Naagtu ma dhaawacmin, laakiin dhacdadan waxeey ku abuurtay baqdin, Si looga hortago xaaladahan, waxaan jeclaan lahayn inaan kuu sheegno sharciyo muhiim ah marka ay timaaddo Arintan oo kale.
Waxaanu soo ururinay qaar ka mid ah bukaanka faa’iido leh oo aan ku shaqeyneynin batteriga oo aanad ka warqabin.
1. Inaad haysatid batterigaaga saxda ah, si aad uga bad Baado dukaamada dayactirka aan rasmiga ahayn.
Waxay u muuqataa in gabadhii Shiineysku ay iyada Qudheeda ay Sabab u tahay inuu Qarxo Mobilkeda sababtoo ah batteri aan habeeneeyn in loo isticmaalo telefoonkaas.
Bateriga waxaa la badalay maalmo yar ka hor dhacdada.
Xaaladdani waxay muujinaysaa in aynaan u jeedsaneeyn dukaamada dayac-tirka ah ee aan qarsoodiga ahayn iyo inay iibsadaan batariyaal Been abuur ah , Waxaa aad looga digayaa in Goobaha Farsamada ay macquul atahy in ay soo iibsadaan batariyaal aan rasmi aheeyn kuwaas oo markii lagu rakibo mobilka abuuri kara qarax.
2. khatar uu keenayo Batarigaada dusha adag.
Bangiyada korontadu waxay noqon karaan kuwo khatar ah xaaladaha qaarkood.
Madaarka Ataturk ee Istanbul, qof rakaab ah ayaa bilaabay inuu la doodo sarkaal kamid ah saraakiisha amniga Garoonka, Kaas oo aan u oggolaanin inuu rakaabka qaato qalabkiisa Electornica , Qofk Rakaabka ahaa oo careysan ayaa ku dhaqmay dareenkiisa duurjoogta ah wuxuuna dhulka ku tuuray qalabkiisa Qaraxa iyo qiiq ayuu sababay , laakiin, nasiib wanaag, dhaawacyo lama soo sheegin, inkasta oo rakaabkii kale ay baqdin weeyn qabeen.
Xaaladdani waxay muujineysaa muhiimada ay leedahay in aad daryeesho qalabkaaga dhabta ah oo aadan Qarash yari darteed u qaadan Qalab ay khatar uga imaan karto naftaada.
3. Qaadashada bateriga.
Bilowga sannadka 2018, dukaan electronic ah ee Shiinaha ku yaala , nin ayaa iibsaday iPhone, Wuxuu si lama filaan ah u go’aansaday in uu qaniino batteriga si uu u tijaabiyo Xaqiiqda qalabkan inuu qarxiyo waxuuna horseeday qarax . Ninka ma dhaawacmin sababtoo ah jawaab celin degdeg ah kama dhalan qaniinyadiisa . Laakiin qaraxu aad ayuu u xooganaa.
Dhacdadani waxay muujineysaa in aysan gabi ahaanba lagula talin in aad qaniinto ama aad jajabiso bateriga maxaa yeelay waxay khatar u tahay caafimaadkeena.
4. Ku dhejinta telefoonka jeebkaaga
Taladaasi waxay noqon kartaa mid nacasnimo ah maadaama qofna uusan ka badbaadin inuu hoos u dhaco. Haddii taleefanku uu beel dareeyo bateriga waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale wax u qabsado, taasoo keenta in uu kululeeyo ama qarxo.
Dhowr sano ka hor, nin ayaa baaskiil ku dhacay oo wuu foorarsaday telefoonkiisa iyo batarigiisa. Natiijo ahaan, wuxuu helay gubasho labadaba qabsatay. Waxa intaas dheer, Arday Maraykan ah ayaa ku fadhistay telefoonkiisa, waxaana qabsaday dab.
Kiisaskaasi waxay cadeynayaan in aad ka taxadirto.
5. Isticmaalida taleefannada gacanta oo aan rasmi ahayn.
Tayada fiilooyinka aan rasmiga ahayn iyo cabsida (gaar ahaan kuwa ah $ 2 ama in ka yar) inta si aan u helno Qarashka qiimaha jaban ayaa sababi kara dab-bakhti ama qarxis. Dabcan, waa in aan marwalba ilaalinnaa xargaha Jajerka oo aan hubinno inaysan qaloocin.
Waa inaan sidoo kale ka taxaddarnaa aaladaha ku kalifaya inaad si deg-deg ah u dalbato (3 AMP iyo ka badan).
6. Ku hadalida teleefonka inta uu ku socdo Jaajarka.
Laguma talin in aad isticmaashid telefoonkaaga inta uu ku jiri Jaajirka, Gu’gan, gabadh 18-sano jir ah oo Hindiya ah ayaa u geeriyootay qarax moobiil ah, Walaalkeed oo u dhowaa ayaa sheegay in walaashiis ay ku hadlaysay taleefankeeda ilaa inta in ay ka baxdo awoodda. Gabadha ayaa go’aansatay in ay telefoonka soo qaadato inta ay weli wadahadaladu sodaan.
Qaraxa Dhashay kadib Gabadha waxaa loo dhigay isbitaalka Iyadoo markii dambe u geeriyootay dhaawac kasoo gaaray qaraxa.
Si looga fogaado dhacdooyinkaas, isku day inaadan isticmaalin telefoonkaaga inta uu ku jiro Jaajarka.
Haddii wicitaanku aad u muhiim yahay, waxaad isticmaali kartaa Specharka Ama samewcada Sare adigoo ka Fogaanaya.